Malunga nePapernerds.de | Imigaqo kunye neziBakala | Ipapernerds
Apha unokufumana abasebenzi bePapernerds.
Umthengi kunye nombhali bahlala bengaziwa ngokupheleleyo!
Isibonelelo seminyaka yethu yamava ekubhaleni kwezemfundo
Inkampani yasePapernerds yasekwa ngonyaka ka-2000 kwaye yenye yeeprojekthi zokuqala zasekhaya kwicandelo lokubhalwa kwamaphepha ngabafundi. Ngeli xesha sincedise amawaka abathengi ukuba bapase ngokugqibeleleyo izifundo, amaphepha ekota, i-bachelor theses kunye namaphepha eemviwo kunye nokufumana isidanga esiphezulu kwithisisi yenkosi, idiploma ithisisi okanye ithisisi yobugqirha. Inkampani liziko elisemthethweni elibhaliswe ngokusemthethweni kwaye linoxanduva lomgangatho weenkonzo zalo njengoko kumiselwe kumthetho waseJamani.
Ukugcinwa kwemfihlo kunye nokuthembeka
Isivumelwano esisemthethweni ngesithembiso sethu. Imigaqo engqongqo yokukhusela idatha. Ukuthobela isiqinisekiso sokubuyiselwa imali. Inkxaso ebanzi yabathengi.
Umgangatho kunye nexesha
Ukubambelela ngokungqongqo kwimihla ebekiweyo ngumthengi. Ukujonga okongeziweyo komsebenzi ngolawulo lomgangatho wethu: ukufomatha, ukukopa (ngeenkqubo ezininzi zesoftware), upelo, igrama, amanqaku eziphumlisi kunye nomxholo.
Inkonzo kunye nentuthuzelo
Umphathi womntu ngamnye kumthengi ngamnye. Inkxaso kuwo onke amajelo onxibelelwano. Inkqubo yezaphulelo eqokelelweyo, unyuselo kunye neerali zabathengi bethu.
Umgangatho kunye nexesha. Ukuthobela imihla ebekiweyo ngumthengi. Uphengululo olongezelelweyo lomsebenzi ngokulawulwa komgangatho we: umxholo, ifom kunye nomsebenzi womsebenzi. Plagiarism jonga kwiinkqubo ezininzi zesoftware.
Inkonzo kunye nentuthuzelo. Umphathi womntu ngamnye kumthengi ngamnye. Inkxaso kuwo onke amajelo onxibelelwano. Inkqubo yezaphulelo eqokelelweyo, unyuselo kunye neerali zabathengi.
Iqela lethu liqukethe abantu abancinci, abonwabileyo abazixabisayo izinto ezintsha, inkululeko yangaphakathi, uburharha, iziphumo zomsebenzi ezilungileyo kunye noluntu ekuhlaleni.
Abaphathi bethu banamava eminyaka yokuxhasa amaphepha abafundi ukusukela ngexesha loku-odola ukuya ekuzisweni. Uqeqesho lobungcali oluqhubekayo lwababhali bethu luqinisekisa olona mgangatho uphakamileyo kunye nokwoneliseka kwabathengi.
Iingcali zethu ziphatha izabelo kuzo zonke izihloko kunye noluleko. Abasebenzi ababandakanyeka ekwenziweni ngokuthe ngqo kwemisebenzi ibandakanya kuphela ootitshala abazilolonga, abafundi bezobugqirha, iinkosi kunye nezidanga zediploma- ababhali ngokubanzi abazimisele njengeengcali kwinqanaba eliphezulu.
Kumnandi ukudibana nawe-sonwabile ukukuxhasa!
Iinyani ezinika umdla ngathi
Umyinge weminyaka yabasebenzi
Iindebe zekofu zityiwa ngabasebenzi veki nganye
Abasebenzi beza emsebenzini ngebhayisekile
Ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka abathengi bethu bafumene izipho
Izityalo sizinika igama
Eyona nto ithandwayo ngumculo
Ngaba ungathanda ukufunda okungakumbi malunga nokubhala ghost?
Fumana oku ngakumbi apha!